Ahoana no hamadihana ny olana ho vahaolana - Victor Mochere
Inona no iraisan'ny mpivarotra, mpamorona vokatra, tompona orinasa ary mpamoaka lahatsoratra? Miara-miasa amin'ny olana rehetra izy ireo ary manandrana vinavina hamahana azy ireo. Na izany aza, misy fotoana izay ifantohan'ny matihanina amin'ny olana ka tsy mieritreritra ny fahafahana. Ny fotoana toy izany dia mametraka ny olona iray amin'ny farany; ny fomba Flip-to-Action dia manampy amin'ny fivoahana amin'izany.
Ny mpamorona ny vokatra danoà Jesper Henriksen no namorona ny fomba. Jesper Henriksen tany am-boalohany dia namorona ity fomba ity amin'ny famolavolana ny Sarintanin'ny dia an'ny mpanjifa, saingy hita fa azo ampiasaina amin'ny toe-javatra hafa. Ny tetika amin'ity fomba ity dia ny famerenana ny olana, ny famoronana hevitra ary ny famoronana sketch amin'ny vahaolana.
Ny fomba Flip-to-Action dia misy dingana 11 misesy.
1. Mifidiana olana na fanaintainana
2. Fantaro ny antony
3. Avereno ny vinavina momba ny olana ho mifanohitra amin'izany
4. Avadika ho “Ahoana no ahafahantsika…”
5. Mandehana any amin'ny sakana hetsika
6. Manomàna vahaolana
7. Lazalazao hoe inona no soa azon’izy io, ary ho an’iza
8. Manaova sarina vahaolana ary hazavao ny fomba fiasany
9. Manapaha hevitra ny fomba hitondrana izany ho amin'ny fiainana
10. Tombanana ny fandaniana
11. Manapa-kevitra izay hatao manaraka
Farito amin'ny fomba marina araka izay azo atao ny olana izay ilainao hahitana vahaolana. Zava-dehibe izany:
Aza mampiasa famaritana abstract. "Kolontsaina orinasa tsy mahomby", hoy na inona na inona momba ny olana
Mamolavola ny olana ho zava-misy - miaraka amin'ny lohahevitra sy ny asany. Ny valin'ny fanontaniana hoe "Iza/Inona?" Ary "Inona no mitranga?" Ohatra: "Iza?" Manampy amin'ny famaritana ny lohahevitra sy ny asa. Mpampiasa Inona no mitranga? Aza mizara ny fampiharana amin'ny tambajotra sosialy
Halaviro ny fifandraisana misy antony. Na inona na inona "satria," "satria," ary "hatramin'ny" dia manjavozavo ny teny amin'ny toe-javatra maro samihafa. “Nisy elanelana ara-bola noho ny tsy fahampian'ny fandoavana mialoha satria tsy matoky anay ny mpanjifa” – ao anatin'ny fehezanteny iray, misy olana telo! Mifidiana iray ary miaraha miasa aminy. Afaka miverina amin'ny ambiny ianao rehefa avy eo
Manontania tena hoe: “Nahoana no mitranga izany? Inona no antony?”. Manorata petra-kevitra telo farafahakeliny manazava ny endriky ny olana. Afaka miantehitra amin'ny angon-drakitra fikarohana ianao na mametraka vinavina tena izy momba ny mekanika.
Ataovy mifanohitra ny hevitra - amin'ny fomba tsara. Mba ho toa tsy misy intsony ny olana. Misy fomba roa hanaovana izany:
Mampiasà fandavana tsotra rehefa "tsy afaka mametraka baiko haingana izahay raha tsy mifandray amin'ny mpitantana" dia miditra amin'ny hoe "afaka mametraka baiko haingana izahay raha tsy mifandray amin'ny mpitantana"
Farito ny tsara indrindra amin'ity toe-javatra ity. Raha tokony ho "manadino ny fampiharana ny mpampiasa", dia "mirona hijery ny rindranasa imbetsaka isan'andro ny mpampiasa ary tsy manadino andro iray"
Avereno amboarina ho toy ny fanontaniana toy ny hoe “Ahoana no ahafahantsika manatratra izany?” ireo anti-hypotheses telo. “Ahoana no ahafahantsika manao fisavana haingana raha tsy misy mpitantana? Ahoana no ahafahantsika mampirisika ny mpampiasa hitsapa ny fampiharana?”
Safidio ny singa mampientanentana sy mampanantena indrindra, "Ahoana no ahafahantsika ...". Ny kandidà idealy dia fanontaniana iray, ny vahaolana amin'izany dia hanome vokatra ambony indrindra amin'ny ezaka kely indrindra. Raha misy fanontaniana maromaro toy izany dia azonao atao ny manambatra azy ireo. Soraty ny fanontaniana apetraho amin'ny valiny vitsivitsy. Amin'ity dingana ity dia tsara kokoa ny miasa amin'ny tetik'ady hevitra: manolotra safidy, eny fa na dia ireo tsy mahazatra indrindra aza, nefa tsy manakiana azy ireo avy hatrany.
Esory ny safidy tsy mitombina sy sarotra. Ny tsotra indrindra sy miaraka amin'izay koa, ny valiny azo ampiharina avy amin'ny ambiny dia ny vahaolana. Ataovy ao anaty fehezanteny iray na roa izany ary soraty. Alao sary an-tsaina hoe mitodika any amin'ny mpampiasa vola na mpamoaka lahatsoratra ianao. Ny famaritana dia tokony ho malalaka, fohy, ary hevitra toy ny hevi-dehibe amin'ny fanombohana na boky. Miezaha hanoratra ny vahaolana ho fohy sy manorina araka izay azo atao. Rehefa dinihina ny lahatsoratra iray, dia soratana ireo hevi-dehibe mba hanamora ny fandraisan’ny mpamaky ny vaovao. Toy izany koa, tsara raha manoratra vahaolana ho an'ny fiheveranao voajanahary ianao.
Eo ambanin'ny pitch, asehoy ny vokatra mahasoa amin'ny fanapahan-kevitra: ilaina ny manamarika hoe iza no iantefan'ny fanapahan-kevitra, inona marina izany, ary nahoana no mendrika izany. Ohatra, azonao atao ny manoratra izao manaraka izao: "ny mpiara-miombon'antoka amin'izao fotoana izao dia afaka misafidy ireo mari-pamantarana ilaina amin'ny tetikasa amin'ny lisitra, manoratra fohy ary mandefa fangatahana tsy misy ny fandraisana anjaran'ny mpitantana.
Manaova vahaolana amin'ny endriny rehetra: ny tantara "tamin'ny dingana - lasa", hevitra manokana momba ny asa na ny lalan'ny mpampiasa rehefa mampiasa ny hevitrao. Na ahoana na ahoana, ny sary dia tokony hamaly ny fanontaniana hoe "Inona ity?" Ary "Inona no ataony?".
Farito ny dingana amin'ny fampiharana ny vahaolana. Tsara kokoa ny mamorona azy ireo araka ny modely MVP (Product Viable Minimum) - dia vokatra misy fampiasa kely indrindra. Tsy mila loharanon-karena be dia be, ary miaraka amin'izay koa, mora ny fitsapana. Tsotra ny famaritana ny andiana asa faran'izay kely indrindra - ny an'ireo ihany no avelanao, raha tsy misy ny hevitra dia tsy hisy dikany mihitsy. Ny zava-drehetra dia tokony hanilika izay tsy azonao atao.
Andramo manombatombana amin'ny mari-pamantarana 1 ka hatramin'ny 3 hoe ohatrinona ny vola sy ny fotoana ilaina hanatanterahana ny vahaolana. Tsy ilaina eto ny famakafakana sy ny fahitsiana maharitra – ny tena tanjona dia ny manomana ny fandaniana amin'ny dingana voalohany amin'ny fampandrosoana.
Tokony ho hetsika kely sy mivaingana ary tsotra izay ataonao amin'izao fotoana izao. Vokatr'izany, manana hevitra momba ny vahaolana ianao - amin'ny teny hafa, hevitra iray mila fitsapana. Tsy ny hoe hohamafisina. Mety mila manadio ilay hevitra ianao ary manandrana azy indray. Angamba tsy hisy na inona na inona ho avy amin'izany mihitsy. Ny zava-dehibe dia tsy izany. Sarobidy kokoa noho ny namindranao ny toe-javatra avy amin'ny sehatry ny olana mankany amin'ny habaka fahafahana ary vonona ny hampiasa azy ireo izao.
Ahoana no hampitomboana ny fifantohana
Ahoana ny fampiasana fanohanana mba hampiroboroboana ny marikao